မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: မေတ္တာရပ်ခံချက် (For SG blogger Gathering)...
Posted by mabaydar at 10:57 PM
ဒီလိုပါပဲ အစ်မရာ..အဆင်မပြေချင်ရင်လဲ ကြံဖန်ပြီး အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာပါပဲ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ Pasir Ris ကို မရောက်ဘူးသေးတဲ့ လူတွေ အတွက် တစ်မျိုးကောင်းသွားတာပေါ့ ခင်ဗျာ..။ ကျနော့်ဘလော့ခ်မှာ ကွန်မန့် ပေးထားခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
9/02/2008 12:48 AM
do you have any plan to provide air ticket for UK bloggers to join to Singapore group? :)
9/02/2008 7:06 AM
ဟ....သူတို့က အဲဒီလိုကို အုပ်စုဖွဲ့မိနေပြီလားဟ
အားနာလိုက်တာဗျာ.. ကျွန်တော် စင်ကာပူ အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ် ကျွန်တော်ကလဲ တကယ်မအားလပ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ..။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေဗျ။ နောက်တကြိမ်လုပ်ရင်တော့ တက်ဖြစ်အောင် တက်မယ် မဗေဒါရေ...။
Steve Evergreen, we do have lucky draw activities which include air ticket from UK to sg. But u must come and pick up the lucky draw by yourself first. :P
Heartmueum, if you envy than do US blogger gathering and sent us the photos. hee hee
Min Yoon thit, u can come and join after your things done. We will still around at night. I guess.
kzy1980, c ya there.
9/02/2008 8:37 PM
Thanksalot for you support to this gathering, sis
now all are well in order naw
C U soon happily!